Izinhlelo ze-Apple zesikhathi esizayo azihambi ngokuhlanganisa i-iPad ne-Mac | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | 26/04/2021 14:00 | iPad Pro, Izaziso
Besikhuluma iminyaka eminingi mayelana nokuthi kungenzeka yini ukuthi izinhlelo zika-Apple zokuhlanganisa ulayini we-iPad neMac ngandlela thile ngokuzayo, okuzoba kungaba yisinyathelo sokuqala sokunyamalala kwamamodeli wokungena ebangeni le-Mac, njengoba kunjalo ngeMacBook Air ngokuthanda i-iPad Pro, ngokwesibonelo.
Ngokufika kwe-iPadOS ne-MacOS Big Sur, sabona ukufana okuningi kuzinhlelo zombili ezisebenzayo. Ngemuva kokwethulwa kwe-iPad Pro entsha neprosesa ye-M1 ye-Apple, kunamahlebezi amaningi okuthi i-Apple ingawahlanganisa womabili amadivayisi, yize inkampani ithi ikusasa lawo womabili amadivayisi lizohlala lizimele.
UGreg Joswiak, oyiChief Marketing Officer, noJohn Ternuns, oyiChief Hardware Officer, bakhulume nabo The Independent, esho ukuthi inkampani awuhleleli ukuhlanganisa amadivayisi womabili abe munye. UJoswiak uthi ukusebenzisa iprosesa le-M1 ku-iPad Pro entsha akusona isibonakaliso sokuthi i-Apple isebenza ukuguqula amadivayisi womabili.
Kunezindaba ezimbili eziphikisanayo abantu abathanda ukuzixoxa nge-iPad ne-Mac Ngakolunye uhlangothi, abantu bathi bayaphikisana. Ukuthi othile kufanele anqume ukuthi bayayifuna yini iMac noma bafuna i-iPad.
Ngakolunye uhlangothi, abantu bathi siyabahlanganisa babe munye: ukuthi kunetulo elikhulu lokuqeda lezi zigaba ezimbili futhi bazenze zibe munye. Futhi iqiniso ukuthi akukho kulezi zinto ezimbili okuyiqiniso. Siyaziqhenya ngokusebenza kakhulu, kanzima kakhulu ukwenza imikhiqizo ehamba phambili ezigabeni zabo.
UJohn Ternus ungeze ukuthi ukugqugquzela kuka-Apple ukwenza iMac ehamba phambili ne-iPad ehamba phambili nokuthi inkampani izoqhubeka nokugxila kulokho ngokuzayo, ilahle imibono yokuhlangana ezungeze womabili amadivayisi.
UJoswiak uqinisekisa ukuthi bebefuna ukusebenzisa iprosesa ye-M1 kuhla olusha lwe-iPad Pro ukuqinisekisa amakhasimende abo angaba khona ukuthi le divayisi ngeke iphelelwe yisikhathi eminyakeni embalwa kanye nokunikeza abathuthukisi ithuba lokwenza isoftware ekuvumela ukuthi uthole okuningi kukho.
Okucacayo ukuthi le divayisi ngeke iphelelwe yisikhathi eminyakeni embalwa ezayo, kepha uma Ikhibhodi Yomlingo inayo. Ikhibhodi ene-trackpad eyethulwe yi-Apple ngonyaka owedlule futhi ayihambelani nesizukulwane esisha se-iPad Pro, njengoba ibanzi ngo-0,5 mm (ngenxa yesikrini se-mini-LED).
Uma uthenge i-Magic Keyboard ye-2018-inch iPad Pro 2020 no-12,9 futhi uhlela ukuthenga i-iPad Pro 2021 entsha, kuzodingeka futhi ukuthi uthenge iKhibhodi Yomlingo entsha, ngaphandle kokuthi i-Apple qalisa iphromoshini noma isaphulelo lapho kutholakala ukubhukelwa kuyo yonke inyanga kaMeyi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Izinhlelo ze-Apple zesikhathi esizayo azibandakanyi ukuhlanganisa i-iPad neMac
Ukuba sengozini kwe-AirDrop kubeka idatha yakho engcupheni